TENY FILAMATR’I MADAGASIKARA : Tsy hita intsony ny maha izy azy ka mahonena
Tadidio anefa fa ireo teny ireo dia vokatry ny fahazoana fahaleovantena izay niadivan’ireo razambe tany aloha tany. Betsaka ihany koa ireo zavatra tsy dia hita firy nefa amboarina isan’andro eto Mahajanga. 28 mai 2010
Mampalahelo sy mahonenana raha vao tonga eto Mahajanga. Indrindra fa mandalo eo amin’ny lapan’ny tanàna izay eo ampovoan’i Mahajanga rahateo.
Toy ny tanàna sy ny faritra rehetra ihany koa ity faritra misy atsika ity ka misy hatrany ny toerana ahitana ireo soratra izay milaza ny filamatr’i Madagasikara. Izany hoe ilay teny manao hoe Repoblikan’i Madagasaikara Tanindrazana Fahafahana Fandrosoana.
Nivadika ambony ambany anefa io soratra io eto Mahajanga amin’izao fotoana izao. Indrindra fa eo amin’ny lapan’ny tanàna izay tsy misy tsy mahita ankehitriny. Lasa hafa mihitsy mantsy ka toy izao Epbikn’i Madgasikaa Tanindrana Fahafaha Fandrosana.
Ireo soratra ireo sisa no hita miranty eo amin’ny lohan’ny hotel de ville. Aiza ihany ny fitiavan-tanindrazana izay lazaina isan’andro. Mahagaga ihany mantsy fa tsy misy zavatra hita firy rehefa tsy miady seza ny mpanao politika. Izany hoe rehefa hiady seza dia sahy milaza ny fitiavan-tanidrazana.
Tadidio anefa fa ireo teny ireo dia vokatry ny fahazoana fahaleovantena izay niadivan’ireo razambe tany aloha tany. Betsaka ihany koa ireo zavatra tsy dia hita firy nefa amboarina isan’andro eto Mahajanga.
Fa maninona rehefa soratra manana ny lanjany manokana toy izao no tsy asiana dikany. Zavatra tena anisan’ny voasokajy ho vakoka Malagasy ihany koa izy ireny. Koa manaitra ireo tompon’andrikaitra eto Mahajanga mba hijery akaiky izao zavatra izao.
Tonga ihany koa ity ny fotoana ankalazana ny faha 50 taona nahazoana ny fahaleovantena. Rariny loatra raha jerena manokana avokoa ireo zavatra izay mifandraiky amin’izany fankalazana izany. Tsara ihany koa raha mba tohinin’ireo olona efa mahita izao tranga izao ny tena tompon’andraikitra manokana amin’izao zavatra izao.